प्रियंकाको अर्को उटपट्याङ, यस्तो फोटो सेयर गर्दै भनिन्- कसले राम्रोसँग देखायो ? – तस्बिरसहित – List Khabar
Home / समाचार / प्रियंकाको अर्को उटपट्याङ, यस्तो फोटो सेयर गर्दै भनिन्- कसले राम्रोसँग देखायो ? – तस्बिरसहित
काठमान्डौ : नेपाली चलचित्र जगतकी चर्चित नायिका प्रियंका कार्की अहिले ग’र्भवती रहेकी छिन्। नायिका प्रियंका कार्कीको चर्चा उनले काम गरेका चलाचित्रको कारण मात्र नभएर विभिन्न कारणले हुने गर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहने प्रियंकाको इन्स्टाग्राममा १० लाख भन्दा बढी फलोअर्स छन्। उनी आफू गर्भवती भएपछि सामाजिक सञ्जालमा झनै सक्रिय देखिएकी छिन्। प्रियंकाले दैनिक जसो नै केहि नौला नौला तस्बीरहरु इन्स्टाग्राममा साझा गर्ने गरेकी छिन्।
कहिले बे’बी ब’म्पको तस्बीरले सबै दर्शकको ध्यानाकर्षण गर्छिन् त कहिले आफ्ना पति र पेट भित्र रहेको बच्चासँग खे’लिरहेको तस्बीरले। त्यस्तै, केहि समय अघि मात्र प्रियंकाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा अकाउन्टमा एक रमाइलो तस्बीर साझा गरेकी छिन् ।
उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा आफू आफ्ना पति आयुष्मान देशराज जोशी र देवर आसिरमान जोशीका साथै अन्य ६ साथी-भाईले बबी बम्प देखाएको तस्बीर साझा गरेकी छिन्।उनले यस्तो तस्बीर राखेर ८ जनालाई ट्याग गर्दै क्याप्सनमा लेखेकी छिन्,”कसले बम्प सबैभन्दा राम्रोसँग शो गरेको छ ?
ल भोट गरम्।” उक्त पोस्टमा कमेन्ट गर्दै आ’सिरमानले लेखेका छन्,”तपाईंले, कुनै प्र’तिस्पर्धा नै छैन। हरेक दिन बच्चाले नै जि’त्छ।” ग’र्भवती अवस्थाका प्रियंकाका केहि तस्बीर :
Previous छाक टार्नै गाह्रो भएपछि ‘भ्वाईस अफ नेपाल’बाट बाहिरिए की यि गायिका छाप्रोमा चटपटे बेच्दै । दुख सुनाउँदै रोईन (भिडियो हेर्नुस)
Next के साउन दुई गतेदेखि पुनः लकडाउन हुन्छ ?